Maoritaniàna Bilaogera .Miatrika Fanenjehana ho Nanala Baraka Tamin’ny Filazàna Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Maoritaniàna Bilaogera .Miatrika Fanenjehana ho Nanala Baraka Tamin'ny Filazàna Kolikoly
Lazain'ny mpampanoa lalàna fa 'very' ny porofo anenjehana ireo bilaogera
Voadika ny 22 Avrily 2019 7:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Español, English
Nosamborin‘ny manampahefana Maoritaniana ireo baogera roa, Abderrahmane Weddady sy Cheikh Ould Jiddou, noho ny nitateran-dry zareo momba ny kolikoly.
Tamin'ny 22 Martsa no voasambotra i Weddady sy Jiddou, rehefa avy nalaina ambavany nanoloana ny Sampana misahana ny Heloka Bevava ara-Toekarena ao Maoritania. Samy nanadihady izy roa ireo ary nanao tatitra mikasika honohono mikasika kolikoly mahavoarohirohy ny filoham-pirenena, Mohamed Ould Abdel Aziz.
Talohan'ny nisamborana azy ireo, samy nanoratra teo amin'ny Facebook momba ny filazana fisian'ny fifandraisana misy eo amin'i Ould Abdel Aziz sy ny kaonty 2 miliara dolara amin'ny banky iray ao Dubaï. Araka ny voalazan'ireo tatitry ny media, nogiazan'ireo tomponandraikitra ao Emirà io kaonty io noho ny fangatahan'ny Departemantan'ny Tahirimbola Amerikana, tafiditra anatin'ny adiny amin'ny famotsiambola.
Nanoratra teo amin'ny pejy Facebook-ny i Weddady hoe nanadihady azy ny polisy mikasika ireo loharanom-baovaony ary nanontany azy ny antony tsy niandrasany ny fanjakana hanao ny fanadihadiana mikasika ilay raharaha. Namaly izy fa ny vaovao momba ireo fananana nogiazana dia efa notaterina tamin'ny tambajotra ary media vahiny no nanao azy, sady “tsy manana finoana mihitsy izy hisian'ny fanadihadiana iray matotra mikasika ny heloka bevava mahasaringotra ny filoham-pirenena sy ireo manodidina azy”.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Martsa, niaraka voaantso ireo blaogera roa ary nalain'ilay sampana iray ambavany noho ireo soratra nataony mikasika an'ireo fanànana voalaza. Nogiazan'ireo tomponandraikitra ny pasipaoron-dry zareo sy ny karapanondron'izy ireo, ary navotsotra iny andro iny ihany ry zareo.
Avy eo indray, ny 22 Martsa, nosamborin'ny polisy indray ireo lehilahy roa ireo taorian'ny nanaporofoan‘ny biraon'ny mpampanoa lalàna fa diso avokoa ireo tatitra ireo ary hiantsorohany ny fanadihadiana sy fanenjehana ara-pitsaràna an'ireo rehetra izay nanaparitaka an'ireo vaovao diso mba “hanimbàna ny firenena, ireo andrim-panjakana, ireo olom-pirenena, ireo rafitra ara-pitsaràna sy ara-bola”.
Nijoro ho voaheloka noho ny fanaparitahana “fiampangana diso” an'i Ould Abdel Aziz ireo blaogera roa, araka ny andininy faha 348 ao amin'ny Fehezandalàna Maoritaniana. Mety hiharan'ny sazy dimy ka hatramin'ny enina taona an-tranomaizina izy ireo. Mijanona any am-ponja izy ireo mandra-pahatongan'ny fotoam-pitsaràna azy.
Tao anatin'ny tafatafa WhatsApp iray niarahana tamin'ny Global Voices, nolazain'i Nasser Wedaddy, rahalahin'i Abderrahmane Weddady sady mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices, fa tsy nahavita nampiseho porofo marina hanenjehana an'i Abderrahmane sy Ould Jiddou akory ireo mpampanoa lalàna. Nomarihany ihany koa fa tsy nahita mihitsy porofo azo tsapain-tanana tao amin'ny antontan-taratasin'ny raharaha ireo mpisolovavany. Hoy izy hoe:
Niala bàla ny mpampanoa lalàna nilaza fa “very” ireo porofo. Io no sarinteny malefaka nampiasainy mba hilazàna hoe “tsy manana porofo mihitsy izahay hiampangana azy ireo, ka noforoninay avokoa ny zavatra rehetra”.
Hatramin'ny 2016, nanao tatitra sy nanoratra mikasika ny fisolokiana iray amin'ny fahazoana trano ihany koa i Abderrahmane Weddady izay, lehilahy iray nanana fifandraisana mampiahiahy tamin'ny fianakavian'ny filoham-pirenena no nanjary lasa tompon'ireo trano an'arivony tao Maoritania tamin'ny fanaovana hosoka mba hivarotana azy ireo indray, hoy ny nambaran‘ny rahalahiny Nasser Weddady. Niresaka ilay fisolokiana ihany koa i Jiddou tao amin'ny pejiny Facebook, hoy ny nambaran’ny vadiny tamin'ny Human Rights Watch.
Naneho hevitra mikasika an'ity asa ity ihany koa i Nasser Wedaddy manao hoe:
Neken'ny maro ho toy ny asa ho an'ny fiarahamonina ilay fanadihadiana nandritra ny 39 volana nataon'ny rahalahiko mikasika ny hafetsifetsena lehibe indrindra nataon'i Ponzi teto amin'ny firenena hatramin'ny fahaleovantenany. Vitany ny nampitsikafona fisolokiana iray izay namoizanà fianakaviana 700 ny tranony sy ny tahirin'izy ireo. Natsikafony ihany koa aza ny fomba ataon'ny filoham-pirenena ankehitriny miaro sy maka tombontsoa amin'ny fisolokiana.
Voafetra kokoa ny fahalalahana maneho hevitra ao Maoritania ary matetika ireo tomponandraikitra no mampiasa ireo lalàna mikasika ny fanalàmbaraka mba hampanginana ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, ireo bilaogera sy ireo mpanao gazety izay manohitra ny rafitra na mampibaribary ireo zavatra tsy mety ataon'ny governemanta.
Tao anatin'ny fanambaràna iray ho an'ny Global Voices, nangataka ny fianakavian'i Abderrahmane Weddady ny mba hanafahana ireo lehilahy roa ireo sy mba hanafoanana ireo fiampangana rehetra natao azy ireo.
Mangataka izahay ny fanafahana tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra an'i Abderrahmane Weddady sy Cheikh Ould Jiddou. Sy ny fanesorana ny fitsaràna rehetra anenjehana azy ireo, ary koa mangataka fialantsiny ofisialy avy amin'ny governemanta Maoritaniana mikasika an'ity fanakorontanana fanalàmbaraka sy boraingona ny rafitra ara-pitsaràna ikendrena ny fanejehana an'ireo mpanohitra ara-politika ity